एनआरएनको ध्यान नेपालमा कसरी लगानी भित्र्याउने भन्नेमै केन्द्रित छ: डा. बद्री केसी, महासचिव – News Portal of Global Nepali
07/06/2018 मा प्रकाशित
गैरआवासीय नेपाली संघ अहिले विज्ञ सम्मेलन, युरोप क्षेत्रिय बैठक र विधान अधिवेशनको तयारीमा लागेको छ । यसै सन्दर्भमा संघका
महासचिव डा बद्री केसीसँग गरिएको कुराकानी ।
– संस्थागत विकास के कसरी अघि बढीरहेको छ ?
वास्तवमा अहिले हामी विश्वका लगभग ८० वटा देशमा पुगिसकेका छौँ । नेपालीहरु पुगेका वा भनौं अलि धेरै भएका देशहरुमा सबै ठाउँमा हाम्रो उपस्थिती रहेको छ र नेपालीहरु अलि कम पुगेको भनेको दक्षिण अमेरिकी मुलकहरुमा मात्रै हो । हाम्रो अहिलेको मुख्य जोड भनेको संख्यात्मक विकासलाई भन्दा पनि गुणात्मक विकासलाई ध्यान दिनु पनि हो । र यही विषयमा गम्भीर रुपमा हामी लागेका पनि छौँ । जस्तै ८० वटा देशमा राष्ट्रिय समन्वय समिति भएपनि ती सबैले हाम्रो ग्लोबल सम्मेलनमा भाग लिन सकेनन् करीब १७ वटा देशमा रहेका समितिहरुले राष्ट्रिय महाअधिवेशन सकेर अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिन सकेनन् त्यसैले पनि ती देशहरुलाई पनि सक्रिय बनाउने लक्ष्य हाम्रो छ । त्यही अनुरुप नै हामी गुणात्मक विकासका लागि काम गरिरहेका छौँ ।
– सदस्यता वृद्धिका लागि के–कस्ता कदम चालिएका छन् ?
अहिले मैले भन्नुपर्दा यतिबेला हाम्रो सदस्यता पनि निकै न्यून छ । लाखौँ नेपाली रहेको देशमा पनि सदस्यता लिनेको संख्या भने २ ÷३ हजारको हाराहारीमा रहेको छ । ५० औँ लाखको संख्यामा नेपाली बाहिर रहेका छन् तर सदस्यता लिनेको संख्या ७० हजारको संख्यामा मात्रै रहेका छन् । त्यसैले पनि अबको योजनामा सदस्यतालाई वृद्धि गर्न केन्द्रबाटै सदस्यता र आईडी कार्ड पनि दिने तयारी छ । र म के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने अब आइडी कार्ड दिँदा पनि त्यो कार्डबाट केही सहुलियत र सुविधा लिन सकिने गरी व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । जस्तै कार्ड भएकालाई ट्राभल गर्दा केही प्रतिशत छुट दिने लगायतका विषयमा हामीले गृहकार्य थालिसकेका छौँ जसबाट हाम्रो ग्लाबल आईडी कार्डको अभियान सफल हुन्छ भन्नेका हामी विश्वस्त छौँ । तर सका लागि विभिन्न देशमा भएका गैरआवसीय नेपालीले निर्धारित प्रक्रिया बमोजिम आफ्नो सदस्यता दर्ता गर्नु जरुरी छ । तसर्थ म उहाँहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छ कि, सदस्यता दर्ता गराएर आईडी कार्ड लिनुस् र हाम्रो यो अभियानमा सहयोग गर्नुहोस् ।
– राष्ट्रिय समितिहरुको व्यवस्थापन र अन्य राष्ट्रिय समिति थप्नका लागि कस्तो काम भइरहेको छ ?
– राष्ट्रिय समितिहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम दिन नसकेको भन्ने गुनासो छ नि ?
– विज्ञ सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ, सम्मेलन किन गर्न लाग्नुभएको हो ?
– विधानसभा पनि गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसको आवश्कता किन पर्यो ?
गैरआवासीय नेपाली संघको संरचनामा समय–सापेक्ष सुधार गर्न, निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन तथा संघको कार्य–प्रणालीलाई अझ चुस्त बनाउन विधानमा व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकाले विधानसभा समेत आयोजना गर्न लागेका हौँ । सो विधानसभामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी एवं सदस्य तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का प्रतिनिधि एवं संघका संरक्षक, सल्लाहाकार तथा मानार्थ सदस्यहरुले भाग लिनेछन् । यसअघि ग्लोबल सम्मेलनमै यो काम गरिन्थ्यो तर त्यो खासै प्रभावकारी हुन सकेन । किनपनि भने त्यो बेला निर्वाचन पनि हुने भएकाले सबैले एकमुष्ट ध्यान निर्वाचनमै जाने हुन्छ, जसका कारण विधानको विषय ओझेलमा पर्छ, त्यसैले पनि यसपालि भने हामीले छुट्टै विधानसभाको मात्रै परिकल्पना गरेका हौँ ताकी प्रभावकारी होस् । रअर्को कुरा भनेको हाम्रो विधान भनेको हामीले मात्र नभई नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै हामीले लागू गर्न पाउँछौँ । त्यसकारणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका समय पारि विधान संशोधन गरेपनि त्यसमा संशोधनको विषयमा छलफल गर्न अनुकुल समय पनि नहुने महसुस गरी हामीले यो पटक चाहिँ अक्टोबरमै संशोधनका विषयमा व्यापक छलफल गर्ने भनेका हौँ । ताकी भविष्यमा संस्थालाई अघि बढाउन सहज होस् भनेर पनि विधानसभा गर्न लागेका हौँ ।
– राष्ट्रिय समितिहरुमा देखिएका विवाद व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
– पछिल्लो समय संस्थामा के–कस्ता काम भइरहेका छन् ?